Imbali ye-Louisiana Purchase
I-Louisiana Purchase kunye noLee noClark Expedition
Ngo-Apreli 30, 1803 isizwe saseFransi sathengisa iikhilomitha ezili-828,000 zeekhilomitha ezili-2,144,510 zomhlaba wasentshonalanga yoMlambo wase-Mississippi ukuya kwi-United States yaseMelika emanyeneyo kwisivumelwano esivame ukubizwa ngokuba yi-Louisiana Purchase. UMongameli uThesham Jefferson, kwelinye leempumelelo zakhe eziphambili, ngaphezu kokuphindaphinda kabini ubukhulu be-United States ngelixa ukukhula koluntu olutsha luqala ukuphucula.
I-Louisiana Purchase yayiyinkqubo engabonakaliyo ye-United States, iindleko zokugqibela ezingaphantsi kweekenti ezintlanu kwihektare kwi-15 yezigidi (malunga neerandi ezingama-283 yezigidi). Ilizwe laseFransi laliyihlane elingabonakaliyo, kwaye ke inhlabathi evundileyo kunye nezinye izinto ezibonakalayo zendalo esiyazi ukuba zikhoyo namhlanje zingenakunikwa kwixabiso eliphantsi ngelo xesha.
Ukuthengwa kweLouanaana kwanyuka ukusuka kuMlambo i-Mississippi ukuya ekuqaleni kweeNtaba zeRoyy. Imida esemthethweni ayifumanwanga, ngaphandle kokuba umda wasempuma wagijima uvela kumthombo weMfula iMississippi ukuya ngasentla ukuya kuma-degrees angama-31 ngasentla.
Amazwe alandelayo ahlanganiswe kwinqanaba okanye kwi-Louisiana Purchase: i-Arkansas, i-Colorado, i-Iowa, i-Kansas, i-Minnesota, i-Missouri, i-Montana, i-Nebraska, i-New Mexico, i-North Dakota, i-Oklahoma, i-South Dakota, iTexas ne-Wyoming.
Umxholo Wembali we-Louisiana Ukuthengwa
Njengoko uMlambo waseMississippi waba yintloko yezorhwebo yokuthengiswa kweempahla phakathi kwamanye amazwe, uhulumeni waseMerika waba nomdla kakhulu ekuthengeni i-New Orleans, idolophu ebalulekileyo yesango kunye nomlomo womlambo. Ukususela ngowe-1801, kunye neenhlanhla ekuqaleni, uTomas Jefferson wathumela abathunywa eFransi ukuba bathethe intengo encinci yokuthenga.
IFransi yayilawula ngokubanzi kwendawo yasentshonalanga ye-Mississippi, eyaziwayo njengeLouanaana, ukususela ngo-1699 ukuya ku-1762, unyaka wanika umhlaba umnxusa waseSpain. Umphathi omkhulu waseFransi uNapoleon Bonaparte wabuyisela umhlaba ngo-1800 kwaye wayenenjongo yokuqinisekisa ukuba khona kwakhe kuloo mmandla.
Ngelishwa kuye, kwakukho izizathu ezininzi zokuba kuthengisa umhlaba kwakuyimfuneko kuphela:
Umlawuli oqhelekileyo waseFransi usandul 'ukulwa nemfazwe eqatha eSaint-Domingue (i-Today-day Haiti) ethatha izibonelelo ezininzi ezifunekayo kwaye unqumle ukuxhamla kwiichweba zaseNyakatho yeMerika yonxweme.
Amagosa aseFransi eUnited States abike uNapoleon kwilizwe elikhulayo ngokukhawuleza. Oku kwagqamisa ubunzima beFransi bokuba banokubuyisa umda wasentshonalanga wamaphayona aseMerika.
IFransi yayingenalo i-navy eqineleyo yokwenza ulawulo lwamazwe kude kude nekhaya, lihlukaniswe nolwandle lwase-Atlantiki.
UNapoleon wayefuna ukudibanisa izixhobo zakhe ukuze agxininise kwiNgxande. Ekholelwa ukuba wayenalo impi kunye nezinto zokwakha ukulwa nemfazwe, umphathi waseFransi wayefuna ukuthengisa umhlaba weFransi ukuphakamisa imali.
Kwaye ke, uNapoleon wayenqwenela ukuphakanyiswa kweMelika ukuba athenge iNew Orleans, ukhethe endaweni yokunikezela yonke impahla yaseFransi yaseMntla yaseMelika njenge-Louisiana Purchase. Ulandelwe nguNobhala kaRhulumente wase-US uJames Madison, abathengiselwano baseMelika baxhamla kule ntengiso kwaye batyikitya egameni likaMongameli. Emuva eUnited States umnqophiso wamukelwa kwiNgqungquthela ngevoti yamashumi amabini anamane anesixhenxe.
U-Lewis no-Clark Expedition ukuya kwi-Louisiana Purchase
UMeriwether Lewis noWilliam Clark baholele uhambo oluxhaswe nguRhulumente ukuba bahlolisise intaba enkulu entshonalanga emva kokusayinwa kwe-Louisiana Purchase. Iqela, elaziwa nangokuthi yiCorps of Discover, lashiya eSt. Louis, eMissouri ngo-1804 kwaye labuyela kwindawo enye ngo-1806.
Ukuhamba ngeekhilomitha ezili-8 000 (i-12,800 km), uhambo lwaluqokelele ubuninzi beenkcukacha malunga nemifuno, izityalo (izityalo), izilwanyana (izilwanyana), izibonelelo kunye nabantu (ikakhulukazi abantu baseMelika) badibene nayo yonke indawo eninzi yaseLouanaana Purchase. Eli qela laqala ukuya ngasenyakatho-ntshona ukuya kuMntla eMissouri, kwaye yahamba ngasentshona ekupheleni kwayo, yonke indlela eya e-Pacific Ocean.
Ibhontshi, iimbotyi ze-grizzly, izinja ze-prairie, izimvu ezinkulu, kunye ne-antelope zimbalwa zezilwanyana ezenziwa nguLuke noClark. Le mibini yayineentaka ezimbini ezibizwa ngokuba zilandelayo: I-Clark's nutcracker kunye no-Lewis. Kuphela, iifayili zika Lewis kunye neClark Expedition zachaza izilwanyana ezili-180 kunye nezilwanyana eziyi-125 ezazingaziwa izazinzulu ngelo xesha.
Uhambo lwaye lwakhokelela ekufunyeneni kwe-Oregon Territory, okwenza entshonalanga kufinyeleleke kuba vulindlela abavela empuma. Mhlawumbi inzuzo enkulu enkulu eluhambweni, nangona kunjalo, ulawulo lukaRhulumente waseUnited States ekugqibeleni lwaluqonda ukuba yintoni ekuthengileyo. I-Louisiana Purchase inikezela i-America oko amaNative aseMerika ayayazi malunga neminyaka: iintlobo ezahlukeneyo zemvelo (imvula yamanzi, iintaba, amathafa, amanxweme, phakathi kwamanye amaninzi) egqitywa ngabantu abaninzi bezilwanyana zasendle kunye nemithombo yendalo.